Jid la cusboonaysiiyay oo la cuskado RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepRoad Wrist-Reed Waddada loo isticmaalo 30 Village ee Gaziantep
02 / 11 / 2018 27 Gaziantep, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
gaznantepte 30 sheep ayaa loo isticmaali karaa jiilka dib u cusboonaysiinta
Degmadda Gaziantep ee Degmooyinka Caasimadda, Şehitkâmil iyo Isgoyska degmada Bizi-Kamisli ayaa dib loo cusbooneysiiyay. Nooca cusub ee wadada xNUMX-kiiloo mitir ee ay isticmaalaan tuulada 30 waxaa soo dhoweeyay muwaadiniinta.
Ku darista wadooyin cusub isgoysyada, buundooyinka iyo howgalladu waxay ka wada shaqeeyaan gobolka oo dhan, Dowladda Hoose ee Magaaladda waxay nolosha siisay mashruucyo badan si loo yareeyo dhibaatooyinka gaadiidka. Jihadahan, ciribta ciriiri-garabka-Kamisli ee gacan-ku-taal ee Magaalada, wadada ayaa furtay nooca cusub ee taraafikada.
Iyada oo ay ku egtahay baaxadda wadooyinka iyo dammaanadda shaqooyinka, Magaala-weyn, oo ujeeddadeedu tahay in laga hortago shilalka gawaarida suurtagalka ah iyo dardargelinta qulqulka taraafikada, ayaa ballaariyey wadada Wrist-Kamisli waxayna ku shubtay dambas. Kooxo ka tirsan Waaxda Arimaha Sayniska ee Dowlada Hoose, natiijada shaqadii laga qabtay wadada laamiga-Kamisli ayaa la hirgaliyay. Iyada oo la arkaayo in waddadu ciriiri tahay oo ay khatar ku tahay taraafikada, magaalo weynta waxay qaadatay wadada weyn ee '5 mitir' ilaa xNUMX mitir.
Dhameystirka shaqooyinka dammaanad-kiiloomitir ee 50 kilomitir ee wadada, Magaalada Caasimadda waxay sii wadaysaa shaqadeeda qaybta harsan ee kiloomitir 5 oo aan kala go ’lahayn. Gaar ahaan Bilek, Arıl, Battal, Altındağ, Turlu, Tokdemir, Korucak, Ururka, Tosunlu, Adakli, Kamisli iyo Köseler Neighborhood (Village) iyo dadka tagaya wadada Nizip'e Bilek-Kamisli, labaduba waa muhiim marka loo eego kaydinta iyo waqtiga marka la eego dareenka, waa la duubay.
Isaga oo adeegsanaya wadada Wrist-Kamisli, Hasan Aslan wuxuu sheegay in aysan suurta gal noqon karin in la barbar dhigo xaalada uu hada wado iyo dowladdii hore wuxuuna u mahadceliyay cidkasta oo gacan ka gaysatay fidinta wadada iyo shaqooyinka rabitaanka ee ay qabato Dowlada Hoose.
Murat Aslan wuxuu kaloo cadeeyay in wadada Bilek-Kamisli ee ay adeegsatay tuulada 30 ay labadaba ciriiri tahay ayna u baahan tahay asfil oo wuxuu yiri ,, annaga jidkanu wuxuu ahaa dhibaatadii dhacday. Wadada halista shilalka ay aad u badantahay, waxay noqotay goob indhoolayaal ah oo taraafikada ah, dhibaato badan ayaan ku galnay. Dawlada Hoose, shaqooyinka wadada, qof walbana salaadda ayuu ku helay. Hadda jidadkeennu way balaarmeen oo waxay noqdeen sidii jid weyn, jidkayaga casriga ah ee la casriyeeyay. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno qof kasta, gaar ahaan Duqa Magaalada Fatma Şahin, oo gacan ka geysatay dhismaha waddada.
Sarıkamışlı National Snowballer ee ciyaaraha Olimbikada
Madaxweynaha Tuna: Mudnaanta koowaad ee gaadiidka ee nidaamka tareenada Madaxweynaha